Panama: Mahafaty Olona Kokoa Noho Ny Ady · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Jolay 2017 18:03 GMT
(Fanamarihana: lahatsoratra efa nivoaka tamin'ny volana Febroary 2007 ity adika eto ity)
#1: Mitatitra momba ny Asa Soa Ara-tsosialy Ataon'ny Mpila Ravinahitra ny Panama Guide:
…Nisakafo hariva niaraka tamin'ny Masera Griselda Rios izay miasa amin'ny fitaizana kamboty nandritra ny telo taona izahay. Eo amin'ny 160 eo ny ankizy sahanin'izy ireo amin'ny fotoana rehetra. Tonga nisakafo hariva niaraka tamin'i Felipe Arosemena (hijo) izay miasa ao amin'ny fitaziana zaza kamboty mandritra ny fiainany manontolo ihany koa izy. Miasa ao efa ho 36 taona ihany koa ny rainy, Felipe Arosemena (padre). Ny zava-nisongadina nandritra ny sakafo hariva dia ny fanomezana avy amin'i Elliese Judge, 14 taona izay nanao tahiry nandritra ny telo taona mahery. Nanolotra vola 303 dolara ho an'ny kamboty izy androany hariva. Tena mahafinaritra izany? Vakio ny lahatsoratra manontolo…
Mahafantatra manokana an'i Elliese Judge, sy ny anadahiny Carlton, ary ireo ray aman-dreniny, Naomi sy Phillip Judge aho. Miasa manao ny bokiny voalohany ahitana tantara noforonina i Elliese, tanora 14 taona. Tahaka ny maro hafa, tonga avy any am-pitandranomasina taona vitsy lasa ny fianakaviana Judge ary nanorim-ponenana tao Panama. Amin'ny maha Panameana, mahatonga ny foko hitempo mafy kokoa izany rehefa mandre zavatra marobe izay manome valisoa ho an'ireo mpandray anjara rehetra tahaka ity voalaza eo ambony ity.
#2: Diablo Rojo kosa mitondra zava-misy ratsy, 3 miliara ary mbola mitohy:
Nomena fanontaniana hafahafa aho omaly: “Inona no tena mamono ny vahoaka ao Afrika ankoatra ny ady Afrikana (izay mbola mitohy mandritra ny taona an'arivony)?” Nihevitra aho hoe, lozam-piarakodia? SIDA? Aretin'ny tsy fanjarian-tsakafo? Tsia, nilaza tamiko ireo manampahaizako ao amin'ny 3 Billion and Counting — [Telo miliara ary mbola mitohy] hoe tazomoka. Ary avy eo aho nomena fanontaniana hafa indray, izay tsy hitako izay novaliana: “Tsy azo nosorohana ve ireo olona an-tapitrisany” – izay ankizy ny ankamaroany (hoy izy ireo nanipika) – “matin'ny tazomoka?” Toa tsy niezaka namaly izany aho; fantatro rehefa ao anaty rano lalina sy mandeha amin'ny vaingan-dranomandry manify aho! Nandòna ahy ny valintenin'izy ireo: “Tsia, tsy misy dikany tanteraka izany.”
Nitondra eritreritra ratsy tato an-tsaiko izany ary nanomboka “nieritreritra mafy aho”: Ny zavatra lazainao dia, misy ny fitsaboana ny tazomoka, fitsaboana voaporofo izany ary tsy mba nampiasaina.” Ka avy eo, nanana fanontaniana aho: “Ahoana no nahatonga izany? Tsy afaka hanaiky izany aho.” Vakio ny tohiny…
#3: Pasión por el Café nahazo ny Loka Gourmand !
Tena faly izahay ary mirehareha manambara fa ny Pasión por el Café, nosoratan'i Patricia McCausland, mpikambana ao amin'ny IACP no nahazo ny Loka Gourmand World Cookbook amin'ny “Lohahevitra Tokana Tsara Indrindra” ao Amerika Latina. Hifaninana amin'ny Loka “Tsara Indrindra Manerantany” ankehitriny ilay boky. Ho ambara amin'ny 7 Aprily ao Beijing, Shina ny valin'ny fifaninanana.
Teratany Kolombiana i Patricia saingy nifindra tao Panama fito taona lasa izay ary mpikambana mavitrika ao amin'ny vondrona IACP Panamaniana. Liana fatratra momba ny kafe izy ary nitsidika ireo fambolena kafe tao amin'ny faritra Kolombia sy Panama raha nanao fikarohana hanaovana ity boky ity. Vakio ny tohiny…